Flowblade ကိုဗွီဒီယိုအယ်ဒီတာအဖြစ်အသုံးပြုရန်အကြောင်း ၁၀ ချက် | Linux မှ
AnaGaby_Clau | | applications များ, GNU / Linux များ
စျေးကွက်တွင်သင်၏မတူညီသောလုပ်ဆောင်မှုများတွင်သင့်ကိုကူညီနိုင်သောပရိုဂရမ်များစွာရှိသည်။ ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်မှုတွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ Flowblade အရာ Linux အတွက်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ထိရောက်ပြီးအကျိုးရှိစွာဖြစ်ပါတယ်။
1 Flowblade ဆိုတာဘာလဲ။
2 Flowblade ကိုထည့်သွင်းနည်း
2.1 Flowblade ကို Ubuntu, Debian နှင့် Linux Mint တွင်တပ်ဆင်ပါ
2.2 Archlinux တွင် Flowblade ကိုထည့်ပါ
3 Flowblade ကိုဗီဒီယိုတည်းဖြတ်သူအဖြစ်အသုံးပြုရန်အကြောင်း ၁၀ ချက်
3.1 Flowblade သည်ပေါ့ပါးသည်
3.2 Flowblade သည်ရိုးရှင်းမှုနှင့်အဓိပ္ပါယ်တူသည်
3.3 Flowblade သည်ဗီဒီယိုသက်ရောက်မှုများစွာရှိသည်
3.4 Flowblade တွင်အသံသက်ရောက်မှုများရှိသည်
3.5 Flowblade သည်ပြန်ဖွင့်ခြင်းချောမွေ့သည်
3.6 Flowblade သည် Drag and Drop သဘောတရားကိုကိုင်တွယ်သည်
3.7 Flowblade တွင်ပြန်ဆိုရန်ရွေးချယ်စရာများရှိသည်
3.8 ကြာရှည်ခံမှုအပေါ် Flowblade လောင်းခြင်း
3.9 Flowblade သည်မြန်သည်
3.10 Flowblade သည်တည်ငြိမ်သည်
Flowblade က ဗီဒီယိုကအယ်ဒီတာ Linux အတွက်လိုင်စင်ဖြင့်ဖြန့်ချိသည် LPG 3.
Flowblade ၎င်းသည်အသံနှင့်ဗွီဒီယိုကိုရောနှောခြင်းနှင့်စစ်ထုတ်ခြင်းအတွက်အစွမ်းထက်သောကိရိယာများရှိသောကြောင့်လျင်မြန်။ တိကျမှန်ကန်ပြီးကြံ့ခိုင်သောတည်းဖြတ်မှုအတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
သင်တပ်ဆင်နိုင်သည် Flowblade ၎င်း၏တရားဝင် repository ကိုပွား, လိုအပ်သောမှီခို install နှင့်အပြေး setup.py
တပ်ဆင်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း Flowblade သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဖြန့်ဖြူးခြင်း၏ repositories ၏ update version ကိုအသုံးပြုသည်။ အဆင်မပြေသောကွောငျ့ဖွစျသညျ ရရှိနိုင်သောမူကွဲသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းဖြစ်နိုင်သည်.
Flowblade ကို Ubuntu, Debian နှင့် Linux Mint တွင်တပ်ဆင်ပါ
Archlinux တွင် Flowblade ကိုထည့်ပါ
လွှတ်ပေး။ စာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ AUR သိုမဟုတ်အောက်ပါ command ကိုသုံးပါ။
Git ဗားရှင်း။ စာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ AUR သိုမဟုတ်အောက်ပါ command ကိုသုံးပါ။
အကယ်၍ သင် Flowblade ကိုမကြိုးစားဝံ့ပါက Flowblade ကိုအဘယ်ကြောင့်အကြံပြုသည်ကို Seth Kenlon ရေးသားသောအကြောင်းပြချက် (၁၀) ခုရှိသည်။
၎င်းသည်အလွန်ပေါ့ပါးသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်သူများအကြားပုံမှန်မဟုတ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Flowblade သည် MLT နှင့် FFmpeg အတွက်ရှေ့တန်းဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုဖြတ်ခြင်းအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည် Linux application အတွက်လမ်းလွဲစေနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်အရံပစ္စည်းဗွီဒီယိုများအတွက်သာအသုံး ၀ င်သောအပိုဆောင်းအပို ၂၀ ပါ ၀ င်ခြင်းမရှိပါ။
၎င်းတွင်ရှိသည့်ဝိသေသလက္ခဏာများသည်ဗွီဒီယိုအယ်ဒီတာပရိုဂရမ်ရှိရမည့်လိုအပ်ချက်များ၏ရှည်လျားသောစာရင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပုံမှန်ဖြတ်တောက်ခြင်းအလုပ်များ၊ အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများအပြည့်အစုံ၊ အချို့သောရိုးရှင်းသောအသံအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်တင်ပို့မှုရှိသည်။
ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်သူများသည်ရှုပ်ထွေးမှုအတွက်နာမည်ကောင်းရလေ့ရှိသော်လည်းအဓိက Flowblade လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးသည် toolbar ၏အလယ်တွင်ရှိသောခလုတ် ၁၀ ခုနှင့်နီးကပ်စွာလိုက်ဖက်သည်။ အလုပ်အသေးစိတ်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်အပိုခလုတ်များ (ချဲ့ခြင်း၊ ချခြင်း၊ ပြုခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း) လည်းရှိသည်၊ သို့သော်ပရိုဂရမ်အများစုသည်အလျားလိုက်ဘားတန်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။
၎င်းကိုတိုးတက်စေရန်အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များတွင်ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများရှိသည်။ ဒါကြောင့်ဒီ tool နဲ့သင်ရင်းနှီးလာတဲ့အခါတည်းဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကချောချောမွေ့မွေ့ပျော်စရာဖြစ်လာမှာပါ။ ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုရန်အချိန်နည်းသော်လည်း Flowblade သည်နာရီပေါင်းများစွာသောဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီးတောတောင်တစ်လုံးဖြင့်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အရိုးရှင်းဆုံးတည်းဖြတ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည် Linux ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာများအားလုံးနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ Frei0r ။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင်ရေးသားပြီးဖြစ်သော၊ အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သော Flowblade ၏ဖော်ရွေသောပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု၍ ဗီဒီယိုအကျိုးသက်ရောက်မှုအုပ်စုတစ်ခုကိုသင်အလိုအလျောက်အမွေခံရသည်။ သင့်တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိလိမ့်မည်။
လူအများစုကအသံကိုဗွီဒီယိုအယ်ဒီတာတွင်တည်းဖြတ်ရန်အနှောက်အယှက်မရှိပါ။ တချို့က ၄ င်းတို့၏အလှည့် ဖြစ်၍ အခြားသူများမှာအသံအယ်ဒီတာပရိုဂရမ်နှင့်မလေ့ကျင့်သောကြောင့်ပြုလုပ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အယ်ဒီတာများအနေဖြင့်၎င်းတွင်အနည်းဆုံးအခြေခံအသံရောနှောခြင်းရှိမရှိမေးမြန်းရန်မလွယ်ကူပါ။
ကောင်းပြီ Flowblade ရှိတယ်။ ၎င်းတွင်သိသာသောအသံအတိုးအကျယ်ရောနှောခြင်းနှင့်ချန်နယ်များလဲခြင်းနှင့်လဲလှယ်ခြင်းကဲ့သို့အပိုပစ္စည်းအနည်းငယ်ရှိသည်။ ကျနော့်အမြင်တွင်၎င်းတွင်အသုံးပြုရန်အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်အဆင်ပြေဆုံးသော့ဖရိန်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အပြောင်းအလဲများကိုသင်ချက်ချင်းကြားနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ရိုးရှင်း၊
၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် "ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုစမ်းသပ်ကြည့်ပြီးဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကြည့်ကြစို့" ၏ပုံမှန်ရူပဗေဒအရကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ အကယ်၍ အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာကိုသင်ပေါင်းထည့်ပါကအသံအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကောင်းစွာကြားနိုင်ရန်အတွက်ခေတ္တယာယီ render လုပ်သင့်သည်။ သို့သော်အမြန်ကိုးကားချက်အနေဖြင့်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
Flowblade သည် Drag and Drop သဘောတရားကိုကိုင်တွယ်သည်
Flowblade သည်ရိုးရာအယ်ဒီတာတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး notepad အစား video drag and drop ကဲ့သို့ဖော်ရွေသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားသင်၏အချိန်ဇယားကိုရယူရန်၊ ကလစ်များနှင့်ကလစ်များကိုဆွဲယူရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဤအယ်ဒီတာသည်ကျန်သောဘာသာများနှင့်တူညီသည်။ အလွန်လူကြိုက်များလာသည့်ဘယ်ဘက်ရှိစည်းမျဉ်း - ကလစ်တစ်ခုအားပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်သွင်းသောအခါ၎င်းသည်၎င်း၏ဘယ်ဘက်ရှိညှပ်သို့ချိတ်ထားသည်။ သို့သော် override cursor ကို အသုံးပြု၍ သင်ကလစ်တစ်ချက်ကိုဆွဲယူပြီးသင်လိုချင်သည့် timeline တွင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရွှေ့နိုင်သည်။ celluloid base layer ကိုတုပနိုင်ရန်အတွက်သင်နှင့်ကလစ်၏ဘယ်ဘက်ရှိအရာအားလုံးအကြားမီးခိုးရောင်ဖြည့်သည်။
Flowblade သည် FFmpe နှင့် MLT ကို၎င်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်နည်းပညာအဖြစ်အသုံးပြုသောကြောင့်သင်၏အလုပ်ကိုပို့ဆောင်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ စီမံကိန်းချိန်ညှိချက်များ၏အများစုနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော rendering လုပ်ရန်အတွက် built-in UI ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်လိုချင်လျှင်သင်သည်အချို့သောချိန်ညှိချက်များကိုညာဘက်ခြမ်းရှိ panel ထဲ၌ထပ်ထည့်နိုင်သည်။
ကြာရှည်ခံမှုအပေါ် Flowblade လောင်းခြင်း
အချို့ပုံစံများသည်အပြန်အလှန်ဖလှယ်နိုင်သည်။ ယေဘူယျဆုံးဖြတ်ချက်များစာရင်းရှိသည်။ သင်အားဖြင့်သင်ရွေးချယ်လိုက်သောဗွီဒီယိုအယ်ဒီတာနှင့်အများအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ ထို tool ကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်လျှင်သို့မဟုတ်၎င်းသည်ပုံစံကိုပြောင်းလဲသွားလျှင်သင်၏အလုပ်အားလုံးကိုဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
Flowblade သည်သင်၏အနုပညာကိုအကာအကွယ်ပေးသည်။ MLT ပုံစံ၊ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်များဖြင့်သင်၏တည်းဖြတ်ခြင်းအလုပ်ကိုသင်ဆုံးရှုံးတော့မည်မဟုတ်။ သင်ယနေ့တည်းဖြတ်သောပရောဂျက်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပြီး၎င်းကိုပြproblemနာမရှိဘဲသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ဖိုင်ကိုအခြားအယ်ဒီတာတစ်ခုတွင်ဖွင့်နိုင်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ပရိုဂရမ်အားလုံးသည်တူညီသောဘာသာစကားပြောနေသကဲ့သို့ဖြစ်သော်လည်းအခြားပရိုဂရမ်များက၎င်းကိုသဟဇာတဖြစ်အောင်လုပ်ရန်အခြားပရိုဂရမ်များမလိုအပ်ဘဲ၎င်းတို့သည်ပွင့်လင်းမြင်သာသောလုပ်ဆောင်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်ဆိုပါစို့။
ဒါဟာအစာရှောင်အစီအစဉ်တစ်ခု ၎င်းသည်အခြားဗီဒီယိုတည်းဖြတ်သူများနှင့်ကွဲပြားခြားနားစွာအလုပ်လုပ်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း၎င်းကိုနှေးကွေးစေသည့်အပိုအရာတစ်ခုမျှမပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်တုန့်ပြန်မှုကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုနှင့်အသုံးပြုရသည့်ရွှင်လန်းမှုဖြစ်သည်။
ဤအင်္ဂါရပ်သည်အမှန်တကယ်ပင်အာရုံခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အင်တာနက်ပေါ်ရှိအစီရင်ခံစာများပြောနိုင်သည်ထက်ကျော်လွန်နေပါသည်။ ဒီခံစားချက်ကိုတိုင်းတာနိုင်တဲ့နည်းတစ်နည်းကဒီကိရိယာကိုဖွင့်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ထောက်ခံချက်မပေးခင်သင်ခံစားရမှာကိုစိုးရိမ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ သင်၏မျက်လုံးများကိုပိတ်ပြီး၎င်းကိုရည်ညွှန်းနိုင်သည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်ဤထူးခြားချက်နှင့်ကိုက်ညီပြီး Flowblade နှင့်လည်းတူသည်။
ဒီအချက်တွေဟာမင်းကိုဒီ tool ကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးဖို့ငါခွင့်ပြုမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Flowblade ကိုဗီဒီယိုတည်းဖြတ်သူအဖြစ်အသုံးပြုရန်အကြောင်း ၁၀ ချက်
ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ git မှ install လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နည်းနည်းလောက်ပျောက်နေပါသည်။ ubuntu repository သည်အလွန်ဟောင်းနွမ်းနေသောကြောင့် (version 0.14) နှင့် git နှင့် setup.py ကို run ရန်ရိုးရှင်းသောလမ်းညွှန်ချက်များမှာမလုံလောက်ပါ (setup .py လိုအပ်သည် အငြင်းပွားမှုများ)။
setup.py တွင်သူတို့ /home/guillermo/git/flowblade/flowblade-trunk/docs/INSTALLING.md ဖိုင်သို့သွားသည်။ DEBIAN ဌာနခွဲဖြစ်သော Ubuntu ဖြန့်ဖြူးနိုင်ပါက…ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်သင့်အားပြောပါသည်။ deb package ကိုသုံးပြီး terminal မှ install လုပ်ပါ။
ငါ GDebi နဲ့ထည့်သွင်းခဲ့ပေမယ့် repository မှာဗားရှင်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရလာတဲ့အခါ synaptic နဲ့သွားပြီး repository version ကိုပိတ်လိုက်ရတယ်။ အဲ့ဒီနောက် gdebi နဲ့ flowblade ရဲ့နောက်ဆုံး version ကို install လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။
ကျွန်ုပ်သည်ထုတ်လုပ်သူမဟုတ်သော်လည်းအခြေခံတည်းဖြတ်ရေးကိရိယာအချို့ကိုအသုံးပြုပါသည်။ ယနေ့အထိကျွန်ုပ် Open Shot ကိုသုံးသည်။ အဘယ်အရာကိုအသုံးပြုရန်ပိုကောင်းသို့မဟုတ်ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မည်နည်း
Manuel Blanco Montero ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ဤဗီဒီယိုတည်းဖြတ်သူအားကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောအရည်အသွေးကျွန်ုပ်၏ ၁၀၀% အမြန်ဆုံးနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကျွန်ုပ်၏ထောက်ခံချက်။
တရား ၀ င်စာမျက်နှာမှအိုင်တီကိုချချပါ။ https://jliljebl.github.io/flowblade/download.html
MANUEL BLANCO MONTERO သို့အကြောင်းပြန်ပါ
ငါယေဘုယျအားဖြင့် KDEnlive (အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့) နှင့် Lightworks (ငါမကြာသေးမီကသူနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်) ကိုသုံးပြီးသူတို့ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။
ငါဟာဝင်းဒိုးကိုသုံးလေ့ရှိပေမဲ့ဒီအယ်ဒီတာကကျွန်မရဲ့အာရုံကိုဖမ်းစားခဲ့တယ်။ ၎င်းတွင် quirks အချို့ရှိသည်၊ တည်းဖြတ်သည့်အခါအသေးစိတ်အချို့ရှိသည်၊ သင်က၎င်းကိုဆွဲယူသည်အထိအစတွင်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်လို့ငါအတွက်ထူးခြားတာပဲ။
openshot နှင့် kdenlive ထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်။ ၎င်းသည်မြန်ပြီးချောမွေ့သည်။
Linux ၏အနက်ရောင်အချက်များအနက်တစ်ခုမှာဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်သူများဖြစ်သည်၊ သို့သော် kdenlive နှင့်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်မှာမှန်သော်လည်း၎င်းသည်အနည်းငယ်ပြတ်သွားသည်။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က၎င်းကိုကြိုးစားရှာဖွေစဉ်ကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းကြောင်းတွေ့ရှိရပြီးယခုလများ kdenlive နှင့်လုပ်နေစဉ်သင်ခန်းစာအချို့ကိုရေးသားရန်ကတိပေးခဲ့သည်။ ယခု mint တွင် repositories ကို install လုပ်လိုက်ပြီ ဗားရှင်းနှင့် ၀.၁၄ ဖြစ်ပြီး၊ deb 0.14 ကို install လုပ်စဉ်ကအမှားအယွင်းများဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ install -f ကိုဖြည့်ဆည်းသောအခါအပလီကေးရှင်းကိုဖယ်ရှားရာ၌အဘယ်သို့ပြုသည်ကိုဖြေရှင်းရန် (ကျွန်ုပ်ဒီမှာရယ်မောသံများနှင့်နီးပါး) ၊ ကျွန်ုပ်သည် 1.16 ကို install လုပ်ပြီးစီမံကိန်းအသစ်ကို 1.16i 1080f တွင်စတင်သောအခါပရိုဂရမ်ကိုစတင်ရန်သို့မဟုတ်ပျက်သွားလျှင်သို့မဟုတ်ပိတ်သွားခြင်း၊ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသောဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုဖွင့်သောအခါ၊ ၎င်းသည်ပိတ်သွားပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုအများဆုံးဆွဲဆောင်နိုင်သည့်မှတ်ဥာဏ်သည် 25Gb သူကအားလုံးကိုစားလိုက်တယ်။ ၄ ခုလဲလဲရှိတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးနဲ့ဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူး။ openhot လို kaos ပေါ့။ ဒီနေ့ linux မှာတစ်ယောက်တည်းနဲ့ငါ kdenlive နဲ့အလုပ်အမျိုးမျိုးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်သည်မည်သူ့ကိုမျှအကြံပြုခြင်းမပြုပါ၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်အားမေ့ရန်အကြောင်းပြချက် ၁ ခု၊ မတည်ငြိမ်မှုနှင့်အရင်းအမြစ်များအလွန်အမင်းသုံးစွဲမှုတို့ကိုပေးခဲ့သည်။
Rafa Mar Multimedia ကိုစာပြန်ပါ